सामाजिक मिडिया: सानो व्यवसायको लागि सम्भावनाहरूको एक विश्व | Martech Zone
दस बर्ष अघि, साना व्यवसाय मालिकहरूको लागि मार्केटिंग विकल्पहरू पर्याप्त सीमित थिए। परम्परागत मिडिया जस्तै रेडियो, टिभी र अधिक प्रिन्ट विज्ञापन पनि सानो व्यवसायको लागि एकदम महँगो थियो।
त्यसपछि इन्टरनेट आयो। ईमेल मार्केटिंग, सामाजिक मिडिया, ब्लगहरू र विज्ञापन शब्दहरूले साना व्यवसाय मालिकहरूलाई उनीहरूको सन्देश बाहिर निकाल्ने मौका दिन्छ। अचानक, तपाईं भ्रम सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको कम्पनी एक महान वेबसाइट र एक मजबूत सोशल मिडिया प्रोग्रामको मद्दतले धेरै ठूलो थियो।
तर कसरी यी कम्पनीहरूले यी उपकरणहरू साँच्चै प्रयोग गरिरहेको छ? २०१० देखि हरेक बर्ष, हामी साना व्यवसाय मालिकहरुलाई प्रश्न सोध्दैछौं कि कसरी सामाजिक मिडिया उनीहरूको मार्केटिंग मिश्रणमा मिल्दछ भनेर बुझ्न।
प्रत्येक वर्ष, डाटा हाम्रो लामो धारणा राय समर्थन गर्दछ र कोरमा अन्य विश्वास हिलाउँछ। त्यसैले हामी तयार छौं प्रश्न सोध्नुहोस् फेरी जबकि केहि चीजहरू तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेका छन्, हामीले पालीहरू पनि देख्यौं किनकि मालिकहरू बढी सक्रिय देखिन्छन्, र सोशल मिडिया प्रयोग गर्न रुचि बढाउँछन् केवल ब्रान्ड सचेतनाको लागि। हामी जान्न चाहन्छौं कि यदि हामी हाम्रो ग्राहकहरुबाट के हेरिरहेका छौं धेरै विस्तृत दर्शकहरु बीच काफी विशिष्ट छ।
गत वर्षको अध्ययनमा, मालिकहरूले अधिक सक्रिय भूमिका लिइरहेका भएता पनि, सोशल मिडियामा लगानी गरिएको औसत समयको मात्रा थोरै घट्न जारी रह्यो। हाम्रो अध्ययनका टिप्पणीहरूले संकेत गर्दछ कि यो गिरावट अधिक उत्पादकता उपकरणको मिश्रण र सामाजिक मिडियामा अधिक केन्द्रित दृष्टिकोणद्वारा ल्याइएको थियो। हामी उत्सुक छौं यो २०१ 2013 मा जारी रहन्छ कि भनेर हेर्नका लागि।
फोर्ब्स र अन्य प्रकाशनहरूले ठूला कम्पनीहरूको लागि सोशल मीडिया प्रयोगको भविष्यवाणी गरिरहेछन्, हामी जान्न चाहन्छौं कि साना व्यवसाय समुदायमा के भइरहेको छ।
के Google+ अन्ततः फेसबुक, ट्विटर र लिंक्डिनको साथ टेबलमा ठाउँ कमाउँछ? एक वर्ष अघि ago०% भन्दा बढी हाम्रा उत्तरदाताहरूले भने कि उनीहरूले कहिल्यै G + मा लग इन गरेनन्। व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ कि हामी अझै एक वर्ष टाढा छौं यस नेटवर्कबाट वास्तवमै समातिरहेको छ, तर म जान्न चाहन्छु डाटा के भन्छ।
कसरी पिन्टेरेस्ट, इन्स्टाग्राम र अन्य छवि आधारित साइटहरू समग्र सामाजिक मिक्समा फिट हुन्छन्? एक बर्ष पहिले म यी द्रुत रूपमा बढिरहेको फोटो साइटहरूको बारेमा साँच्चिकै उत्साहित थिएँ तर धेरै जसो मेरो सानो व्यवसाय ग्राहकहरू डाइभिंगको बारेमा त्यति उत्साहित भएनन्।
त्यसोभए, यदि तपाईं १०० भन्दा कम कर्मचारीहरू भएको कम्पनीको स्वामित्व लिनुहुन्छ वा काम गर्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई के सोच्छौं जान्न चाहन्छौं। तपाइँ कसरी आफ्नो मार्केटिंग को एक हिस्सा को रूप मा सोशल मीडिया को उपयोग गरी रहनु छ। कृपया जवाफ दिन केहि मिनेटहरू लिनुहोस् हाम्रो सर्वेक्षणमा प्रश्नहरू। हामी फेब्रुअरीको अन्त्यमा लगत स collecting्कलन गर्नेछौं, त्यसपछि यस वसन्तमा परिणामहरू साझेदारी गर्ने।
टैग: मार्केटिङसानो व्यवसाय सामाजिक मिडियासामाजिक संजालसामाजिक मिडिया सर्वेक्षण
मोबाइलको लागि विज्ञापनदाताको गाइड